Filoha Rajaonarimampianina : “Aoka hifampiteny fa tsy ho fatin-kenamaso isika” | NewsMada
Filoha Rajaonarimampianina : “Aoka hifampiteny fa tsy ho fatin-kenamaso isika”
“Hatramin’ny oviana no nisy teto Madagasikara izany hoe Malagasy mamono Malagasy noho ny tsy fitiavana. Misy ny lalàna, fampiharana izany no tokony hifanentanantsika. Aoka ianareo raiamandreny, mpanabe, mpivavaka… Aoka isika rehetra tia tanindrazana hifampiteny sy tsy ho fatin-kenamaso, ka sahy hilaza fa tsy mety izany.”
Io ny kabarin’ny ny filoha Rajaonarimampianina tamin’ny fahatsiarovana ny faha-70 taon’ny 29 marsa 1947, tany Moramanga, omaly. Tsy azo atao izany famonoana olona izany, tokony hotoherina izany. Satria ny Malagasy no voatondro amin’izany. Ny kolontsain’ny Malagasy no potehina amin’izany. Ny fitiavan-tanindrazana no atosika ho very ao anatin’izany.
Mila atambatra ny hery
“Areheto mba tsy ho faty ny fanilon’ny tena: arovy mba tsy hitsilopilopy ny fitiavan-tanindrazana”, hoy izy. Fanilon’ny firaisankina no ilaintsika, fanilon’ny fihavanana, fiaraha-mientana, firaisam-po, fanarenana, fitiavan-tanindrazana. Tokony hiredareda ao anatintsika izany, ka tsy tokony hatahotra hampiseho izany isika.
Mila atambatra ny hery ary ampitaina ny fanilo: inona ny hatao ho an’ny firenena? Mampita amin’ny asa izay tokony hatao sy mitarika ary manoro ny lalan-kaleha isan’andro ny mpitondra. Inona ny anjara biriky entinao hampandrosoana ny firenena. Aoka tsy fifanenjehana, fifampihantsiana, fifamonoana no entintsika ho fanilo miampita?
Mila misy mihaino izay tsy matin-kenamaso miteny
Tsy ny amin’ny hoe fitsaram-bahoaka izay misy famonoana olona tsy ara-dalàna ihany no tokony hifampitenenana, ka tsy hananana henamaso. Eo koa ireo tsy fanarahan-dalàna toy ny kolikoly, ny fanodinkodinam-bolam-bahoaka, ny kiantranoantrano, ny fisian’ny tsimatimanota, ny vahiny mitavana harem-pirenena, ny tsy fangaraharan’izay atao… Efa samy sahy niteny ny mpitondra ny amin’izany ny fiangonana, firaisamonina sivily, mpanao politika… Mila misy mihaino izay tsy matin-kenamaso miteny. Ny vahoaka ihany no diso?
Nakarina ny fanampiana ireo bekotromaroholatra
Nakarin’ny fitondram-panjakana ho 3 hetsy Ar isan-telo volana ny vola fanampiana ho an’ireo bekotromaroholatra, raha 1 hetsy Ar mahery kely izany teo aloha. Hojerena koa izay hahazoana manampy ary ireo amin’ny fanafody, bodofotsy… Raha ny fantatra, 1 652 ireo bekotromaroholatra manerana ny Nosy.